XOG: Agaasimaha NISA oo amray in ilaalada laga qaado Kalane Jiis – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
XOG: Agaasimaha NISA oo amray in ilaalada laga qaado Kalane Jiis
June 19, 2022 Xuseen 8
Sida ay xaqiijinayaan ilo wareedyo kala duwan Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud & Taliyaha NISA Mahad Salaad ayaa kahor intii aysan ka duulin garoonka diyaaradaha ee Muqdisho, una socdaalin Imaaraatka Carabta amray in Ilaalada laga wareejiyo Xildhibaan Cabdullaahi Aden Kulane, oo horey usoo noqday Madaxa Shaqaalaha ee Hay’adda NISA, haddana katirsan mudanayaasha golaha shacabka.
Saraakiisha NISA ayaa sheegay in ay haystaan Amarka agaasimaha oo bixiyey kahor intii uusan raacin Madaxweynaha, kaas oo ah in dhammaan Ilaalada laga qaado Mr, Kulane.
Sidoo kale, Labo kamid ah Ilaalada Xildhibaan Kulane ayaa laga xiray maanta garoonka diyaaradaha ee Muqdisho, iyagoo fasax ugu baxayey qoysaskooda oo degan meel kabaxsan Caasimada Soomaaliya.
areey mahad salaad waa shaqatagyey walee sheegada waxay tagee in dhagaxley iyo kaakumo loo qaxi doono sansibaarka walee waa noo shaqeeyey hadana putland kala dir kkk
Xilibaan hadiiba hubka laga dhigi karo xilkana waa laga dhigan karaa ee warkaan
Ciyaalka loo ma sheegee ee wariye gaylan wax aad sheegto miyaa wayday ?
Puntlandtimes sheeko xariirta inoo wad kkkkkk
Hubka ayaa lala baxsanayaa miyaa oo lala aadayaa Gedo? Ar orgoble Farmaajo maxaa
haysta xertiisii? Kala carar, kala dhuumasho, i-bixiyow-i-bixi, ninbow tabartaa.
Farmaaha laftiisa gaar ha laga hayo, yuusan dhuumanin uusan ka cararin dacwooyinka badan ee ku soo fool leh.
Ninba waa mare mus ma kula koray!
Si kastaba, marka la eego sida Xasan & kooxdiisu u raad dhaqaajiyeen, waxa ay u muuqataa in villadii ay ku habsadeen “jamhad ciil qabta oo ka aarsanaysa fallaago ay xukunkii ka riixdeen”. Kuwii horena sharcigii gacantay ku qaateen, kuwanina waaba ka sii xag jiraan. Su’aashuse waxa ay tahay, Farmaajana goormaa la gelayaa?!
walee sansibaarka doorood dhulka waa galiyey hawiye kaa guulaysayey kaa hari maa waxaa ku talin lahaa darood halashaqeeyo xamza say u badbaadaan ileen mahad ayaa hubka ciidanka ka qaadayee ka dib alshabaab ayey baylah u yihiin kkk
To Sama wade adeer horta sidii nin u hadal maxaad la niiclayn sidii dumarkii, Sinsibaarka aad ku waalatay waa gus wayn yahay miyaa lagu yiri! Adeer horta yaa kula Daarood ah yaase Kulane jiis iyo Farmaajo la Daarood ah inangumeed inangumeed dhalay Daarood yar yare dad xume ah ahi Daarood mahan waana kuwa la rabo in la dhalfeeyo. Daarood waa Majeerteen iyo Ogaadeen waxa kale waa jifaajiriq gun ah in la karbaashana raali iyo nus baan ka nahay.
Somali wali dagaal miyay
Uciilqabaan 40sano wali
Kuma filno miyaa hadii aay
Run noqoto beegsiga kulane
Ee aay abaabuleen xasan
Iyo ninka gacansarka laleh
Shabaab mahad salaad maanka
Hakuhayeeno in aay kudheceen
Dabin siyasadeed oo qatar
Ah taas oo aay kadhalan karto
Ficil aan lamahadin,
Shalay ayay aheed markii aay
Mudaharaadka dhigayeen hawiye
Qoryo wato oo aan calamka
Kadhicin, meshii shilin lagusheego ayay xasan iyo xirtiisu boorso marran uqaatan
Manakala haraan kuwan dalka
Halaha kabadbaadiyo ,,,